Tontolon’ny Bilaogy Saodiana Herinandro Faran’ny Taona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Septambra 2017 3:16 GMT
(Fanamarihana: tamin'ny taona 2006, volana Desambra no nivoaka ny lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy)
Bilaogy matory, solosaina angatra, kolontsaina fitondrana fiarakodia Saodiana, fanapahan-dohan'i Saddam Hussein, MTV Arabo, bilaogera lesbiana Saodiana, Krismasy, sy bebe kokoa amin'ity herinandro ity. Andeha isika hanomboka izany …
Mifandraika amin'ny fanjavonan'ny fironan'ny bilaogy voalaza tamin'ny herinandro lasa teo, namoaka lahatsoratra mahaliana momba ireo “bilaogy matory” Saodiana i Ahmad. Nahitàna fiakarana tampoka ny isan'ny bilaogy Saodiana tamin'ity fahavaratra ity; maro amin'ireo bilaogy vao teraka ireo no tsy ahitana fanavaozam-baovao nandritra ny roa volana mahery hatramin'izao. Amin'ny fomba malefaka, manontany ireo izay mamaky ny blaoginy i Saleh: “Angatra ve ny solosainanao?” Mampahafantatra lahatsoratra Wikipedia mitondra ny lohateny hoe “Zombie Computer (Solosaina Angatra)” amin'ireo mpamaky namany Arabo izy. Ny herinandro lasa teo tao amin'ny tontolon'ny blaogy Saodiana ihany, nahitana ny fisian'ireo bilaogy roa navoakan'ireo tovovavy Saodiana izay mankalaza ny fomba fiaina lesbiana. “Saudi Ballerina” an'ilay tovovavy Saodiana 19 taona any Riyadh, Arabia Saodita. “Two Dykes and a Closet,” kosa an'ilay mpifankatia lesbiana izay avy any Riyadh, Arabia Saodita ihany koa.
Raha momba ny Krismasy, sy ny fankalazana izany ao amin'ny Saodiana, mizarazara ny hevtr'ireo bilaogy Saodiana. Nandefa lahatsoratra manohitra ny fisian'ny ravaka sy vatomamy Krismasy any amin'ny toeram-pivarotana Saodiana maro i Al-Failasouf. Hoy izy hoe: “Amin'ny teny tsotra, tsy tompon'andraikitra amin'ny fitondrana fahasambarana ho azy ireo amin'ny fotoan-dehibe masina isika, raha maty noho ireo kristianina tahaka azy ireo ny rahalahintsika eny rehetra eny.”Manohitra mafy izany fomba fijery izany tao anatin'ny lahatsorany i Ahmed (a.k.a. Jeansa Saodiana). Ny fanoherany dia hoe: “Izany no mahatonga ny olona toa an'i Debbie Schlussel manohitra ny fanendrena an'i Barack Obama ho filoham-pirenena satria Silamo ny rainy.” Ankehitriny, raha tianao ny handre izany avy amin'ny olona iray izay niala kristianina ary nivadika ho silamo sy lasa nonina ao Arabia Saodita, tokony hamaky ny lahatsoratr'i Nzingha momba ny fankalazana ny Krismasy ianao.
Mikasika ny kolontsaina fitondrana fiara Saodiana, mitaraina momba ny tanora Saodiana “mpanenona”, zavatra iray tsy nety nampiasainy i i Margrave, ary nanontany tena izy hoe: “Nahoana ianao [Saodiana] no manana anarana roa na telo samihafa isaky ny lalambe rehetra ?!” Vao haingana i Crossroads Arabia no nandefa ny rohy mikasika ny fampitandremana momba ny dian'ny Amerikana mankany Arabia Saodita:
Due to concerns about the possibility of additional terrorist activity directed against American citizens and interests, the Department of State continues to warn U.S. citizens to defer non-essential travel to Saudi Arabia. The United States Mission in Saudi Arabia remains an unaccompanied post as a result of continued security concerns.
Noho ny ahiahy momba ny mety hisian'ny asa fampihorohoroana fanampiny atao amin'ny olom-pirenena sy ny tombontsoa Amerikana, manohy mampitandrina ireo olom-pirenena Amerikana mba hanaisotra ny dia tsy misy dikany mankany Arabia Saodita ​​ny Departemantam-panjakana. Mijanona ho lahatsoratra tsy misy fifanarahana vokatry ny fitandroana ny filaminana ny Misionan'i Etazonia any Arabia Saodita .
Tao amin'ny vaovao hafa, nandefa momba ny fanisana farany amin'ny sazy famonoana ho faty an'i Saddam Hussein i Dotsson. Mahagaga, toa efa tapitra sahady ny fanisàna; amin'izao fotoana izao i Etazonia dia “manafaka voafonja 18 avy any Guantanamo”, araka ny lahatsoratr‘i Crossroads Arabia.
Ankehitriny, ho famaranana …
Namoaka lahatsoratra momba ny fametrahana ny MTV Arabo vaovao i Ahmed (a.k.a. Saudi Jeans), namoaka lahatsoratra mahaliana momba ny fomba nanampian'ny YouTube “ny polisy Kanadiana mba hahita lehilahy iray heverin'izy ireo fa tompon'antoka tamin'ny vono olona” i Muneeb, i Al-Failasouf indray nandefa (amin'ny teny Arabo) fandinihana sasany mikasika ny fanavakavahana goavana ny vehivavy ao Arabia Saodita, ary farany, Prometheus namoaka lahatsoratra momba ny fanitsakitsahana vao haingana nataon'ny Vaomiera tamin'ny zon'ny tsirairay sy ny fanararaotana ny reny Saodiana sy ny zanany vavy. Nitondra ny raharaha mikasika renim-pianakaviana iray sy ny zanany vavy any amin'ny fitsarana ilay Saodiana mpisolovava mpiaro zon'olombelona, ​​Abdulrahman Al-Lahem ary nilaza hoe “efa niandry taona maro izy hahita raharaha toy ity.”